Ha Aqrin Hadii Aad Jaceyl La il Darantahay (Qiso Jaceyl oo Murugo Badan) | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Ha Aqrin Hadii Aad Jaceyl La il Darantahay (Qiso Jaceyl oo Murugo Badan)
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 19-07-16 5:52 PM Adunyadu waa imtixaan waa dhibaato iyo murugu badantahay dadka isku si uma soo wajahdo waxa ayna qof walba ku qaabishaa waji gooniya dadka qaarbaa farxad iyo reyn reyn ku qaata waqtigooda inta badan halka ay kuwa badan la noolyihiin murugu ciil iyo uurkutaalo iyo caro ma aan dhamaad laheyn.
Hadaba aqristoow sifiican u dhuux qisadan xanuunka badan iyo sida ay wax u dheceen. Axmed-yare wuxuu kamid ahaa ardada wax kabarata dugsiga Mujamac ee Magaalalada Baledweyne waxaana maalin maalmaha kamid ah ay isbarteen gabar lagu magacaabo Aniga oo iyana kamid aheyd gabdhaha wax ka barta isla dugsigas islamarkaana dhigata fasalka amma galaas-ka kahooseeya.
Axmed iyo hooyadii maxaa dhaxmaray? Axmed oo ahaa agoon Aabahii geeriyooday islamarkaana ahaa kan uguweyn ama curadka reerka ,wuxuu aaminsanaa in haddii Hooyadii usheego arintan ay tahay mid ay ku farxeyso laguna taageeri doono ,Axmed-yare waxa uu yimid Hooygiisa oo kuyaalla xaafadda Kooshin ee Magaalada Baledweyne waxa uuna durbadiiba uu bilaabay in uu lafaqo Hooyadii uu arintii u bandhigo .